कमला र सप्तकोसि नदिमा पानीको बहाब अहिले सम्म्कै उच्च, सिराहा र धनुषाको कमला नदि आसपासका गाउँमा हाइएलर्ट !
प्रकाशित मितिः असार २८, २०७६
सिराहा,असार २८ गते । तराईको कमला नदी र सप्तकोशी (कोशी) नदीमा पानीको बहाब अहिलेसम्मकै उच्च भएको अधिकारीहरुले जनाएको छ ।
धनुषाको कमला नगरपालिकाको वडा नं. ४, ५, ६ र ७ , सहिदनगर नगरपालिकाको वडा नं. २ बतराहीमा कमलाको पानी पस्ने सम्भावना प्रबल भएको छ भने सिरहाको बसपिटटा, सिरहा, कल्याणपुर, चतरी, पर्साही, फुलबरिया लगायतका गाउँहरुमा समेत खतरोको संकेत देखिएको जनाइएको छ । दुवै जिल्लाका प्रशासनले उक्त क्षेत्रहरुमा हाईअलर्ट जारी गर्दै सुरक्षित स्थान खोज्न आग्रह गरेको हो । यता, सप्तकोशीमा पानीको बहाब निरन्तर उच्च हुँदै गएकोले पानी अहिले खतराको सहतभन्दा पनि माथि आएको हो ।
नेपाल जलविज्ञान तथा मौसम विभागले जनाए अनुसार कोशीमा विहान ७ बजेसम्म १२.२३ मिटर पानीको बहाब मापन गरिएको हो । जसमा खतराको सहत १०.५० मापन गरिएको छ ।
सिरहा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाका लागि नेपाल
सिरहा : समाजमा प्रहरीको जवाफदेहीता र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि समुदायि – प्रहारी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश नं. २ प्रहरी कार्यलय, जनकपुरधामको आयोजनामा सिरहा सदमुकाममा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन गरेको छ । प्रदेश नं. २ का आठ जिल्ला मध्ये सिरहाबाट उक्त कार्यक्रम
जयमधेस भन्ने बित्तिकै मधेस बिरोधी शक्तिको
सिरहा,भाद्र ४ गते । प्रदेश नं २ सदनमा बहुप्रतिक्षित र सर्वाधिक महत्व तथा चासोको विषयहरुले प्रवेश पाएका छन, त्यो हो प्रदेशको नाम र राजधानी । मलाई लाग्छ यो संगसंगै भाषा पनि प्याकेजमै आउनुपर्थ्यो तर आएन । यसले बहसलाई सुदृढ र निष्कर्षमा पुग्न सहज बनाउँथ्यो । जे भए पनि सदनमा प्रस्तुत
रोग र दुर्घट्नालाई निमन्त्रण दिदैँ जिल्ला
सिरहा,भाद्र ४ गते । जिल्ला अस्पताल सिरहाले आफनो मुल प्रवेश द्धारको अगाडी सडक साईडमा फोहर डमपिङ्ग बनाई रोग र दुर्घटना दुवैलाई निमन्त्रण दिईरहेका छन् । अस्पातालमा विरामीहरुलाई प्रयोग गरेका औषधीका डबाहरु मुल गेटको साईडमा फाल्ने गरेको त्यहाँका व्यपारीहरुले बताउछन् सडक पेटीमा फालिएका
सिरहा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाका लाग
जयमधेस भन्ने बित्तिकै मधेस बिरोधी श
रोग र दुर्घट्नालाई निमन्त्रण दिदैँ
स्कूलका बिद्यार्थीहरुलाई ट्राफिक नि
सडकबाटो, ढल निकाष र सरसफाईका कारण
जरिन खानको खुलासा, ‘सलमान खानसँग मे
‘चेन अफ कस्टडीभित्र रहेको भिडियो कस
पर्सामा भारतीय चालकबाट पैसा असुल्ने
अस्पतालको लापरवाहीले ज्यान गुमाएका
झिंगाले किन खुट्टा रगड्छ : कारण जान
पाटन प्याथ ल्याब–जहाँ हुन्छ सस्तोमा
बर्दीवाला प्रहरीमाथि हातपात : तर, प